Vaovao Hey! Kafe Miroborobo any India
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Vaovao Hey! Kafe Miroborobo any India
Ao anatin'ny areti-mifindra izay nanimba ny indostrian'ny varotra ary niafara tamin'ny fanakatonana ireo marika antsinjarany maro, Hey! Nipoitra niroborobo ny kafe. Nanokatra fivarotana 60 tany Indonezia hatramin'ny nanombohany tamin'ny Jona 2020 ny zava-pisotro niomerika miorina any Indonezia ary kasaina hiitatra ho fivarotana 300 amin'ny faran'ny taona 2022.
Hey! Ny Kafe dia atidohan'i Edward Djaja, 26 taona, mpanorina ny Seven Retail, izay manana marika antsinjarany maro ho avy toa an'i Golden Lamian, Chain Shinoa Fast-Casual malaza any Indonezia izay misy fivarotana 70 mahery any Indonezia hatramin'ny nanombohany azy tamin'ny taona 2017.
“Eto Hey! Kafe, ny metriko kintana avaratra dia fitomboan'ny fivarotana fivarotana mitovy, izay ahafahan'ny marika hahatratra ny toekarena stellar unit. Faly izahay milaza fa ny paikadinay dia niteraka fe-potoana famerenam-bola tao anatin'ny 12 volana, izay dingana lehibe ho antsika mba handroso haingana amin'ny fomba maharitra amin'ny taona ho avy, "hoy i Edward.
Laser mifantoka amin'ny fampandrosoana ny vokatra sy ny fahafaham-po ny mpanjifa
Mba hahatratrarana io metrika kintana avaratra io, Hey! Kafe dia mampiasa vola tsy tapaka amin'ny marika sy ny fivoaran'ny vokatra vaovao. Amin'ny alàlan'ny fampiasana dingana fampivoarana vokatra miverimberina sy siantifika, Hey! Kafe dia afaka manandrana hevitra momba ny vokatra mihoatra ny 20 isam-bolana. Izany dia nitarika ho amin'ny karazan-tsakafo tsy manam-paharoa sy lafo indrindra, toy ny Hey-Shake Series!, izay ahitana ny Strawberry Heaven Hey-Shake sy Choco-Cashew Hey-Shake, ankoatra ny hafa.
Miaraka amin'ny endrika miavaka sy ny toerana misy azy, Hey! Ny Kafe dia mikendry mazava tsara ny tanora arivo taona sy hip - ny mponina be indrindra amin'ny taona ao Indonezia - ho tsena lehibe. Manolotra zava-pisotro isan-karazany amin'ny vidiny mora, Hey! Kafe dia malaza be amin'ny arivo taona, miaraka amin'ny kaopy 12,000 mahery amidy isan'andro.
Modely fanamafisam-peo tohanan'ny teknolojia
Ny fanitarana haingana ny marika dia tohanan'ny modely maivana. Ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana dia ahitana trano heva kely izay manamaivana ny fandaniana renivola ary manamora ny serivisy fanaterana Grab & Go. Manodidina ny 70% amin'ny varotra marika dia misy baiko fandefasana an-tserasera. Manolotra modely fiaraha-miasa ihany koa ilay marika, mitovy amin'ny an'ireo rojom-pivarotana mora indrindra any Indonezia.
Ny maodely fandraharahan'ny orinasa dia nanintona ny mason'ny mpampiasa vola, toa an'i Trihill Capital, izay nanohana ny orinasa tamin'ny fihodinana voa. Amin'ny alàlan'ny fitazonana modely maivana amin'ny fananana, ny orinasa dia manantena ny hifantoka amin'ny loharanon-karena amin'ny fampitomboana ny lanjan'ny marika sy ny fampiasam-bola bebe kokoa amin'ny teknolojia.
Mandeha ny drafitra hananganana fampiharana finday an-trano manomboka amin'ny 2022, mba hanomezana traikefa manokana sy tsy misy fotony kokoa ho an'ny mpanjifany 350,000 isam-bolana.